Haddii aad u qoraan video clip ah adiga oo isticmaaleya isticmaale video camera, waa badbaadi doonaa sida kordhinta file .MOD ah. Files mod waa MPEG Files laakiin la kordhin file mod. Iyada oo ku xidhan sida aad qortid video clip, si fudud ayaad magaca karaa kordhinta file mod in Mpg playable aad pc. Si kastaba ha ahaatee, haddii file leeyahay muuqa of 4 ah: 3, waxaa looga baahan doonaa in aad u isticmaashid qalabka diinta ka ah in wax laga beddelo si qaab MP4. Diinta faylasha mod wax fudud inaad la wadaagto xasuus qabtay online sida faylasha MP4 yihiin heer sare Tifaftirayaasha oo la jaan qaada qalabka ugu. Haddii aad ku sugan tahay u diraynaa, Wondershare Video Converter yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee aad u. Ma aha oo kaliya waxaa Wondershare mod ugu wanaagsan ee Converter MP4, sidoo kale waa aalad video tafatirka weyn.
Qaybta 1.1: Best mod in MP4 Video Converter
Qaybta 1.2: Sida loo Beddelaan mod in MP4 in Talaabooyinka Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate?
Qaybta 2.1: Free mod in MP4 Video Converter
Qaybta 2.2: diinta mod in MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Free
Qeybta 3: Aqoonta Extended u F4V
Mod in ay diinta ka MP4 waa hab fudud. Marka bilaabay Wondershare Video Converter Ultimate , users heli fudud oo hanuuniyey marayo geedi-socodka si loogu badalo iyo edit faylasha video. Waxaa jira sababo badan oo ah sababta aad ka fiirsan doono inuu diinta mod in qaab MP4. Tusaale ahaan, haddii aad socda ee MAC, iPhone, iPad ama, qaabka caadiga ah ee files video in MP4 ah. MP4 ka dhigaysa mid u fudud in la sii qulquli video online tayo audio weyn u qaab video ugu caansan adduunka oo dhan samaynta.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo aad fiidiyo video files si MP4, halkan waa tallaabooyinka sida soo socota.
Tallaabada 1 Daahfurka codsiga dooro faylasha
Marka hore waa in qofku u soo baxdo iyo rakibi ah " Wondershare Video Converter Ultimate "iyo bilowno waa.
Markaas riix badhanka file add in uu doorto files mod aad rabto in aad si loogu badalo iyo iyagoo aad ku dartid codsiga.
Waxa kale oo aad furi kartaa file video in browser oo si toos ah jiidi oo hoos u ku Wondershare Video Converter Ultimate.
Fiiro gaar ah: Wondershare Video Converter Ultimate taageertaa beddelaad Dufcaddii oo aad ku shuban karto dhowr files oo dhan hal mar.
Tallaabada 2 qaab file Dooro wax soo saarka
Tan iyo markii aad rabto in aad si loogu badalo mod in MP4,
On gacanta midig oo uu furmo suuqa, ka heli menu dropdown hoos "Qaabka Output:"
Laga soo bilaabo dropdown dooro "Qaabka" tab
Dooro MP4 sida qaab saarka video jeclaystay.
Waxaad ka arki kartaa si faahfaahsan oo ku saabsan talooyin / files il iyo wax soo saarka files
Tallaabada 3 Edit File
Halkaa marka ay marayso, sidoo kale isbedel ku audio iyo video ku soo koobin in aad ka jeelahay aad samayn kartaa. Qaar ka mid ah isbedel aad sameyn kartaa waxaa ka mid ah bitrates video, xallinta, heerka jir, tayada video, iyo muuqa iyo kuwo kale.
Waqti aan isku shaandheyn fiidiyo si ay u daboosho asalka ama sababo kale. Marka aan u ciyaarno videos guriga sida TV-ga ama Computer ay play sida screen kulankaan. Si looga hortago arrimaha caynkaas ah waxaannu u baahan tahay in ka hor edit waxa loogu badalo.
Wixii sixiddiisa edit button dooro (Jaantuska 4)
Qalab edit waxa uu furi doonaa. Halkan waxa aad ka qaban karaan shaqo tafatirka badan sida goo, Dalag, Noocyo Raadka, Watermarks iwm, laakiin imminka isku shaandheyn doonaa shaashadda video ah. Ujeedada in fadlan raac talaabooyinka soo socda:
Guji "Dheellitir" tab ka qalabka tafatirka ah
Riix badhanka labaad taas oo micnaheedu yahay "90degree isku shaandheyn ku bilow dhanka"
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa muuqa daaha buuxa ama Mozilla aad video adigoo raacaya habraaca.
Dooro "Dalag" iyo gacanta resize aad video
Dooro pre-set "muuqa"
Ka dib markii tafatirka dooro "OK" button.
Tallaabada 4 Dooro folder Ahaado
Waxaad dooran kartaa "folder Open" aad kombuutarka halkaas oo files gediyay badbaadi doonaa. Isticmaal dhirtu in ay doortaan jidka caga file ama folder.
Talaabada 5 Start diinta
Marka la dooranayo click folder caga on button bilaawga ee beddelaad ka mod in MP4 inuu ku soo bilowdo ka. Waxaad ka arki kartaa habka iyo mar walba oo joojisid.
Wondershare Video Converter Free waa video ka Converter ugu wanaagsan lacag la'aan ah mod in videos MP4. Tani waxay kaa caawin kartaa in aad loogu badalo iyo edit files fiidiyo aad lacag la'aan ku user saaxiibtinimo interface. Intaas waxaa sii dheer, Wondershare Video Converter Free uu leeyahay qaar ka mid ah tayada kale.
1. Dhammaan ka mid video Converter:
Wondershare Video Converter Free Siinayaa xal diinta DVD video one stop suuragelinayo in aad dooxi DVDs, diinta aad mod videos in qaabab video oo waaweyn iyo sidoo kale iyaga gubi in DVD.
2. video Professional iyo Converter audio:
Beddelaan aad mod in files MP4 ama inay qaab kale oo weyn oo wax playable ku saabsan qalabka aad si fudud oo wax ku ool ah aan wax u dhimin ay tayo leh.
3. Video qalabka tafatirka:
Edit files ka hor iyaga diinta ay la qabsado, lana siii, isagoo intaa ku daray subtitles, biirtay, ka mid ah fursadaha kale oo badan.
4. Habee profile wax soo saarka,
Haggaaji profile soo saarka warbaahinta ciyaaryahan kasta oo isticmaalaya pre-nooc ah.
5. taageero farsamo Easy in ay isticmaalaan oo lacag la'aan ah ka heli kartaa:
Uma baahnid inaad knowhow kasta oo farsamo si ay u isticmaalaan codsiga.
Interface ayaa software iyo hababka diinta videos ee " Wondershare Video Converter Ultimate "iyo" Wondershare Video Converter Free "mid ah kuwo ku jira. Halkan waxaa ku qoran sharaxaad gaaban oo ku saabsan sida loo badalo video mod in Mp4 ee "Wondershare Video Converter Free"
Orod Wondershare Video Converter Free, files la xusho oo qaab
Import / darsada files mod by jiiday iyo tagtey on interface ka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa "dari files" badhanka si ay u helaan oo ay doortaan mid ama ka badan files mod u Upload.
Qaab saarka Select
Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka loo baahan yahay.
Isla sida Wondershare Video Converter Ultimate, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa itusi si aad video hor u beddelaya.
Laakiin faragelinta Wondershare Video Converter Free waa ka duwan yahay gol isku midka ah.
Ka dib markii aad ku qancay in wax soo saarka aad video si fiican loo saxar, guji "Beddelaan" button. Marxaladani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo oo ay ku dhameeyaan.
1. Waa maxay file mod?
Mod waa kordhin file video ah oo ay abuureen Panasonic iyo JVC sida qaabka caadiga ah marka la fiidiyo tapeless ah lagu qoro. Mod qaab video waa wax caadi ah in labada kamaradaha Panasonic iyo Canon. The files mod waxaa lagu duubay oo ku saabsan kaararka xusuusta SD iyo cajaladaha adag kamarada. Format ayaa la barbar dhigi karaa MPEG2, HDV, hore, XDMCAM. Si kastaba ha ahaatee, kordhin mod ayaa weli caadi ahaan loo isticmaalo in qaar ka mid ah digital video kamaradaha.
2. Sidee u ciyaaro mod on Windows iyo Mac?
Ciyaaryahanka PC ama video kasta oo taageera MPEG-2 si fudud u daawan kartaa files mod. Files mod ayaa sidoo kale waxaa si fudud u daawan karaa iyadoo la isticmaalayo ciyaaryahan DVD ah ay sabab u tahay heerka waafaqsanaanta video DVD-ka. Haddii aad rabto in aad la wadaag saaxiibadaada faylasha qabtay online, waa in aad iyaga loogu badalo in ay qaab MP4 video.
Downloadable lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan qalab diinta si fudud Hep kartaa in aad loogu badalo mod in qaab MP4 taas oo ah qaabka heerka geeyo online oo waa playable on qalabka ugu. Waxa kale oo aad dooran kartaa si loogu badalo faylasha online la isticmaal xor ah utilities diinta oo aan aad u baahan tahay inay iyaga ku rakibi aad kombuutarka, sida http://www.free-videoconverter.com/ .
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan mod in MP4 leh tayo sare leh